MM BT July2018 | Myanmar Our Daily Bread
၂၀၁၈ ခုနှစ် သမ္မာကျမ်းစာ လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်
လောကီဘ၀အသက်တာက ပျားပန်းခတ်အလုပ်များမြောင်စဉ် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှ အားဖြည့်လန်းဆန်းစေခြင်းကို သင်လိုအပ်ပါသည်။ ဇူလိုင်လ၌ပြုလုပ်မည့် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း အစီအစဉ်သို့ လာရောက်ပါဝင်လျက် ဘ၀အသက်တာ၏စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ရန် ခွန်အားသစ်များတောင်းခံကာ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အမြင်သစ်ဖြင့် ရှုမြင်နိုင်အောင် ဘုရားသခင်ကို ဖွင့်ပြခွင့်ပေးပါ။
အားပြည့်တက်ကြွရှင်သန်သောခရစ်ယာန်အသက်တာ - တမန်တော်ဝတ္ထုမှ သင်ခန်းစာ
ယော ၁၀း၁၀ တွင် သခင်ယေရှုကတိပြုထားသည့် “အထူးသဖြင့် အသက်နှင့်ပြည့်စုံသောအသက်တာ” ကို မည်သို့ ရယူနိုင်မည်နည်း။ တမန်တော်ဝတ္ထုကို အတူတကွလေ့လာလျက် အဖြေရှာရန် လာရောက်ပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။
ဆရာကြီး ဒေါက်တာ အဂျစ်သ် ဖါနန်ဒိုနှင့်အတူ တမန်တော်ဝတ္ထုကို လေ့လာလျက် အားပြည့်တက်ကြွသော ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏အဓိပ္ပာယ်ကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
ပြုလုပ်မည့် နေ့ရက်၊ နေရာ နှင့် အချိန်
ဇူလိုင်လ (၉) ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊ ညနေ (၄း၃၀) နာရီိ၊ စိန်ဂျွန်း အင်္ဂလီကန်ဘုရားကျောင်း၊ တောင်ငူမြို့။
ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်၊ အင်္ဂါနေ့၊ မနက် (၁၀) နာရီ၊ ဇိအုန်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သံတောင်ကြီးမြို့။
ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်၊ ကြာသာပတေးနေ့၊ နေ့လည် (၁း၃၀) နာရီ၊ ရှင်မဿဲကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
အာရှ ရေခံမြေခံယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီ တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်း
နို့ထိန်း(မိခင်)သည် မိမိသူငယ်တို့ကို ကျွေးမွေးပြုစုသကဲ့သို့ ``(၁သက် ၂း၇) အသင်းတော်ကို ပြုစုခဲ့သည့်ရှင်ပေါလုထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ မည်သည့်သင်ခန်းစာများ ရရှိရယူနိုင် မည်နည်း။ ၎င်းသင်ခန်းစာများကို အာရှရေခံမြေခံနှင့်အညီ မည်သို့ဆီလျော်အောင် အသုံးချနိုင်မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူတကွ အဖြေကို လေ့လာရှာဖွေကြရန် အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဧ၀ံဂေလိတရားကို ဝေမျှခြင်း(သို့) တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းက အစဉ်မလွယ်ပါ။ ရှင်ပေါလုထံမှ ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်သင်ခန်းစာရယူနိုင်ပြီး အာရှရေခံမြေခံနှင့်အညီ မည်သို့ဆီလျော်အောင် အသုံးချနိုင်သည်ကို ဆရာကြီး ဒေါက်တာ အဂျစ်သ် ဖါနန်ဒိုက ဝေမျှပေးပါမည်။
ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်၊ ကြာသာပတေးနေ့၊ မနက် (၁၀) နာရီ၊ လီဆူဓမ္မတက္ကသိုလ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
မည့်သည့်အခကြေးငွေ မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးရန်မလိုပါ။ သင်နှင့်အတူလာရောက်ရန် သင့်မိတ်ဆွေများကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါသည်။
ဆရာကြီး ဒေါက်တာ အဂျစ်သ် ဖါနန်ဒိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။
BIBLE TEACHING 2018
When life gets busy, what you need isatime of refreshing from the Word of God. Come join us at our Bible teaching events in July, and let God give youafresh perspective of His Word and new strength to face life’s challenges.
A Vibrant Christian Life: Lessons from Acts
Join us in this study of the book of Acts and discover how you can “have life, and have it to the full”, as Jesus promised in John 10:10.
Join Dr. Ajith Fernando onajourney through the book of Acts and discover what it means to liveavibrant Christian life.
JULY9(Mon), 2018: St. John Anglican Church, Toungoo, 4:30pm
JULY 10 (Tue), 2018: Zion Baptist Church, Than Daung Gyi, 10:00am
JULY 12 (Thurs), 2018: St. Matthew Kachin Baptist Church, Pyin Oo Lwin, 1:30pm
Discipling in an Asian Culture
Come and discover what we can learn from Paul, who cared for the church like "a nursing mother cares for her children" (1 Thessalonians 2:7), and how we can apply these lessons in an Asian context.
It isn't always easy to share the gospel or disciple someone. Dr. Ajith Fernando will share on what we can learn from Paul and how we can apply it in an Asian context.
JULY 12 (Thurs), 2018: Lisu Baptist Seminary, Pyin Oo Lwin, 10:00am
There’s no admission charge or registration needed. Invite your friends to come along!
For more information about the speaker, Dr. Ajith Fernando, click here.